Ndụmọdụ ka ị bụrụ gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị | Bezzia
Nke Torres | | Home
A na-eme mmegharị ọ bụla dị obere mgbe ịchọrọ ịdị ndụ ndụ kwa ụbọchị. Ndị mmadụ na -akpaghị aka nzọ ụkwụ ha, otu ha si eme ihe kwa ụbọchị, ihe ọ bụla a na -eme ugboro ugboro ruo oge ụfọdụ na -abụ ihe a na -eme kwa ụbọchị. Omume ndị nwere ike ịdị mma mgbe ụfọdụ ma n'ọnọdụ ndị ọzọ, adịghị mma. N'ụlọ a na -eme ọtụtụ mmejọ ndị a na priori anaghị ebute mmetụta anya, mana nke ahụ n'ikpeazụ ha na -enwe mmetụta dị egwu na mbara ala.
Ruo ọtụtụ afọ, ọha mmadụ amatala nke ọma mkpa ọ dị ikpochapụ omume na -adịghị adịgide. Ụmụaka ugbu a, ha na -enweta mmụta gburugburu ebe obibi n'ụlọ akwụkwọ na enwere mkpọsa mgbasa ozi na-adọrọ adọrọ, nke nwere ozi doro anya ma dị ike. Mana oge ụfọdụ, anyị anaghị ama etu esi akọwa ozi ndị ahụ, a na -ahapụkwa ha n'etinyeghị ya n'ọrụ.
1 Ịchọrọ ịdị na-emekwu gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị?
1.1 Tinye 3 Rs: belata, jigharị na imegharị
1.2 Ekwela ka mmiri tufuo
1.3 Belata oriri ike
1.4 Dị ọcha na ngwaahịa gburugburu ebe obibi na eke
1.5 Zere nkwakọ ngwaahịa plastik
1.6 Debe ụgbọ ala
Ịchọrọ ịdị na-emekwu gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị?
Maka nke a, anyị na -ewetara gị ndụmọdụ ndị a ka ị bụrụ gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị, ka ị nwee ike itinye ndị ahụ n'ụzọ dị mfe ma dị mfe. mgbanwe nke ị ga -eji belata akara ukwu ebe obibi gị ị ga -enwe ike inye aka na ọgụ maka ụwa ga -adigide.
Tinye 3 Rs: belata, jigharị na imegharị
Nke a bụ ntọala ihe ọmụmụ ihe, ụzọ kachasị mfe iji nweta agwa na omenala na -adigide. Belata ihe ịzụrụ, chee echiche nke ọma ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ịchọrọ ma ọ bụ ọ bụrụ n'ezie na ọ ga -enwe ike n'ime ụlọ gị. Tupu ịtụfu ihe, jigharị, arịa nri iko dị mma maka idobe nri a kwadebere, maka ịchekwa mkpo na ọbụna maka ịchọ mma. N'ikpeazụ, imegharị ihe, ịmara ịtụba ihe niile n'ọnọdụ ya bụ ihe omume.
Ekwela ka mmiri tufuo
Ngwongwo nke ụwa enweghị njedebe, yabụ, ọ dị mkpa ka onye ọ bụla mụta ka esi eji ha eme ihe n'ụzọ ezi uche dị na ya. Mmiri dị ụkọ n'ọtụtụ akụkụ ụwa yana mgbanwe ihu igwe, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na nke a nwere ike ime n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Naanị ị ga -ejikwa mmiri, mechie mgbata mmiri mgbe ị na -asa efere, saa ahụ kama ịsa ahụ, ekwela ka mmiri na -agba mgbe ị na -ata ikikere ezé, Wdg
Belata oriri ike
Agbanyeghị na ha dị ọnụ ọnụ karịa, ọkụ ọkụ ịchekwa ọkụ dị ọnụ ala n'ikpeazụ ebe ọ bụ na ha na -eri obere ume karịa nke ọdịnala. Ọ dịkwa oke mkpa gbanyụọ ngwaọrụ niile mgbe ejighị ya, ị maara, onye ọkwọ ụgbọ ala ama ama na -acha ọbara ọbara nke ngwa ụlọ na -eri ike oge niile. Chekwaa ume ma ị ga -ahụkwa ya na ụgwọ ọkụ eletrik.
Dị ọcha na ngwaahịa gburugburu ebe obibi na eke
Enwere ngwaahịa nhicha a na -apụghị ịgụta ọnụ n'ahịa, nke ọ bụla nwere ihe eji eme ya nke na -ekwe nkwa ịhapụ ụlọ gị ka ọ dị ọcha yana nje. Ihe ị nwere ike nweta ngwaahịa eke, dị ọnụ ala ma kwanyere ugwu ugwu na gburugburu ebe obibi. Iji hichaa ụlọ gị kpamkpam, naanị ị ga -achọ soda, mmanya ọcha na mmanya ọcha na ihe ọ lemonụ lemonụ lemon. Ị chọrọ ịchọpụta ka esi eji ngwaahịa ndị a ehicha ụlọ gị kpam kpam? Anyị na -agwa gị a njikọ.
Zere nkwakọ ngwaahịa plastik
Mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, nri dị njikere, yogọt, ngwaahịa nhicha, ihe niile dị na nnukwu ụlọ ahịa na -abata na akpa rọba. Ihe na -emebi gburugburu ebe obibi nke na -agbasi mbọ ike ikpochapụ. Ruo taa, ọtụtụ ngwaahịa plastik apụla, mana a ka nwere ọtụtụ ihe ị ga -eme. Mgbe ị na -azụ ahịa, weta akpa a na -eji emegharị emegharị ma ọ bụ akwaZụrụ na nnukwu iji zere nkwakọ ngwaahịa plastik ma megharịa ndị niile ị na -enweghị ike izere ịzụrụ.
Debe ụgbọ ala
Jiri ụgbọ njem ọha maka njem ị na -eme kwa ụbọchị, na -eje ije ka ike kwere gị wee chọpụta ihe na -atọ gị ụtọ ịnya igwe. Na mgbakwunye na ịdị ndụ gburugburu ebe obibi, na -adọba ụgbọ ala ọ ga -azọpụta gị nnukwu ego na n'amaghịdị ya, ị ga -enwe ike meziwanye ụdị ahụ gị. Yabụ, site na obere mmegharị ahụ a na-eme kwa ụbọchị (n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ) ị nwere ike bụrụ ihe na-eme gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Ndụmọdụ ka ị bụrụ gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị